हिमाल खबरपत्रिका | ठ्याक्कै मिल्छ !
ठ्याक्कै मिल्छ !
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न थालेपछि रेडियोले दिने मौसम सम्बन्धी समाचारमा पनि श्रोताको विश्वास बढेको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको मौसम पूर्वानुमान कक्ष । मुकेश पोखरेल
अहिले अवस्था फेरिएको छ । महाशाखाले गएको ३० फागुनमा भोलिपल्ट (१ चैत) बाट लगातार तीन दिन पश्चिम नेपालमा चट्याङ र असिनासहित वर्षा हुने जनाएको थियो । १ चैतमा कपिलवस्तु र दाङ आसपास तथा २ र ३ चैतमा अर्घाखाँची, गुल्मी र पाल्पामा चट्याङ र असिनासहित भारी वर्षा भयो । वायुमण्डलमा विकास हुने छिनछिनको मौसमी तथ्यको जानकारी लिन सन् २०१० देखि नयाँ प्रविधि प्रयोग हुन थालेकाले पूर्वानुमानमा सुधार भएको महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद् बरुण पौडेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, “विकसित देशमा पनि मौसम शतप्रतिशत मिल्दैन, हामीले गर्ने मौसम पूर्वानुमान ८० देखि ८५ प्रतिशतसम्म मिल्छ ।” महाशाखाले अहिले तीन दिनसम्मको मौसम पूर्वानुमान सम्बन्धी सूचना दिन्छ ।
आधुनिक प्रविधिले फड्को
महाशाखालाई आधुनिक प्रविधि मार्फत मौसमको सूचना लिन चीन र जापानले सघाउँछन् । जापानको ‘हिमावारी–८’ भू–उपग्रहले बादल, त्यसको दिशा, तापक्रम, आद्र्रता र हावाको गतिसहितका तस्वीर हरेक १० मिनेटमा उपलब्ध गराउँछ । त्यसैगरी चीनको ‘एफवाई–टुजी’ भू–उपग्रहले मनसुनको समयमा हरेक आधा घण्टामा र अरू वेला एक घण्टामा वायुमण्डलको मौसमी अवस्था र तथ्य विवरण उपलब्ध गराउँछ । वरिष्ठ मौसमविद् पौडेलका अनुसार भू–उपग्रहले ‘रिसिभर’ मार्फत उपलब्ध गराएका मौसमी तस्वीर महाशाखाको कम्प्युटरमा ‘डिस्प्ले’ हुन्छन् । ती सूचनालाई गणितीय प्रविधि मार्फत विश्लेषण गरेर पूर्वानुमान गरिन्छ । यो प्रविधि अत्याधुनिक मौसम मापन प्रणाली हो ।
मौसमविद् पौडेलका अनुसार स्थानीयस्तरमा विकसित हुने मौसमी प्रणालीले नजिकै पानी पर्ने र घाम लाग्ने हुन्छ । उनी भन्छन्, “डाँडाकाँडा र स्थानीयस्तरमा विकसित हुने मौसमी प्रणालीलाई राडार, भू–उपग्रहले समेट्न सक्दैन । त्यसकारण प्रि–मनसुनमा अनुमान नमिल्न पनि सक्छ ।”
नेपाल २०२३ सालमा मात्र विश्व मौसम सङ्गठनको सदस्य बनेको हो । मौसम पूर्वानुमान गर्न भने १ पुस २०२५ देखि शुरू गरेको हो । त्यतिवेला प्रविधिको अभावमा आँखाले देखिने मौसमी अवस्थाको अवलोकन गरेर सीमित ज्ञानका आधारमा पूर्वानुमान गरिन्थ्यो । त्यसअघि भारतले नेपालका विभिन्न ठाउँमा जल तथा मौसम केन्द्रहरू स्थापना गरेको थियो । ती केन्द्र मार्फत मौसमी सूचना लिएर भारतले नै नेपाललाई हवाई उडानका लागि मौसमी सूचना दिन्थ्यो । नेपालको मौसम प्रणाली विश्लेषण गर्न प्रविधिको प्रयोग हुन थालेको धेरै भएको छैन । फिनल्याण्डको सहयोगमा सन् २०१० देखि शक्तिशाली कम्प्युटरको प्रयोग गरी गणितीय आधारमा मौसम पूर्वानुमान शुरू भएको हो । विकसित मुलुकहरूले सन् १९५० देखि नै प्रयोगमा ल्याएको यस्तो प्रविधि विकासशील देशमा भने सन् १९९० पछि विस्तार भएको थियो ।
त्यसअघि २०४४ सालमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागको स्थापना भएपछि मौसमी विवरण लिन विश्व मौसम सङ्गठनको सहयोगमा भू–उपग्रह राखिएको थियो । उक्त भू–उपग्रहले हरेक १२ घण्टामा वायुमण्डलमा रहेको मौसमको तथ्यहरूको श्यामश्वेत प्रिन्ट पठाउँथ्यो । भू–उपग्रहले पठाउने श्यामश्वेत तस्वीर र नाङ्गो आँखाले देख्ने वरिपरिको बादलको अवस्थाका आधारमा मौसमविद्हरूले मौसम पूर्वानुमान गर्थे । जसले गर्दा पूर्वानुमान मेल खाने संभावना धेरै न्यून हुन्थ्यो । त्यही कारण रेडियो नेपालले दिने मौसम सम्बन्धी सूचना श्रोताले विश्वास गर्दैनथे ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी वरिष्ठ मौसमविद् इन्दिरा कँडेल अहिले भू–उपग्रहले अत्याधुनिक उपकरणबाट वायुमण्डलको ठूलो क्षेत्रको मौसमी अवस्थाको सूचना उपलब्ध गराउने हुनाले पूर्वानुमानमा सजिलो भएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “हिजो नाङ्गो आँखाले देखिने सीमित क्षेत्रको मौसमी अवस्था हेरेर पूर्वानुमान गरिन्थ्यो । आज प्रविधिको सहायताले संसारका विभिन्न ठाउँमा विकसित भएको मौसमी अवस्थाको सूचना डिजिटल माध्यमबाट लगातार उपलब्ध हुन्छ ।” अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगकै कारण पूर्वानुमान मेल खान थालेको उनी बताउँछिन् ।